GAANFAAGAANFA AFRIIKAAMOO GAANFA SANGAATI? -Temesgen Atnafu Mulatu – Beekan Guluma Erena
GAANFAAGAANFA AFRIIKAAMOO GAANFA SANGAATI? -Temesgen Atnafu Mulatu	Beekan Erena
AFOOLA/OROMO FOLKLORE June 18, 2016OROMO
87SHARESKana TamsaasiKana Tamsaasi
GAANFAAGAANFA AFRIIKAAMOO GAANFA SANGAATI? –
Gaanfi Afriikaa kan jedhamuu kun; Innumti aniif ati keessa jirru kun,gaanfa diina nurra qolachuuf biqilemoo kan kan lafee kalee koo jifatee guddina ana quucarsudhaa dhiiroo? Gaanfa ittiin yeroo wal waraanan an dhiiguu,Gaanfa yeroo waancaafi fal’aanaa kan tokkoo yeroo loolamoo an mataa koo irratti of argu!
Gaanfa cabe sana keessaan dhiiga tiruukootitu dhangala’aa. Lakkii dhiisaa!Horiin gaanfaa kun Yeroo hundaa wal jifatti malee waliin hin jifattu. Siilaas dallaa horii wal hin fakkannefi gafarsaaf(Bineensa) fi Sa’ii(bineeldii) waliin keessa jiraatan keessaa nagaan nii bu’aan soba.Kan nama aarsuu gaanfaa isa hin qabnetu gaanfaaf lolaa…
Dubbiin gaanfa Afriikaa kun ana dhibaa. Dachee Goolii ta’uun Ummatnii gaanfa kana keessa jiraatan gaanfa malee yeroo isaan gaanfaan itti dhiigan agarra. Tokkoon tokkoon biyya kunnenii keessatti kan warra gaanfaatti hin ramadamneti dhiigni dhangala’u. Abban humnaa harka ilma haadha hiyyeesaa Matiriikiin dhufuufi dideen fanjii qaba. Harka ilmaa haadha hiyyeesa ofii hiyyoomseen boombii darbatee AK_47 dhukaasa. Kan gamaa achii as dhukka’u garuu tiruu koo madeesse lafee koo cabsa. Obboleesa koo ajjeesee qe’ee warra gadda ana godha.
Inni gaanfakoon jifatu garuu isan dhiige dhoksee isan dhiigseen dhaadachaa Oduu isaa isa xiyyitii caalaa fiigu sana dhukaasa. An kaniin jedhu, Xoophiyaan keenya kun maaliif gaanfa tokkoon alshabaabiif Ertiraa jifatii? Gaanfii wal nyaatus maaf gaanfa tokko jedhamee? An qofaa koo gaanfaa Afirikaa,Gaanfa kessatti dhiignii isa humna hin qabnee ittiin fi gaanfa waancaa warrii lubbuu baasan dhiiga dadhabootaa ittin dhuganii fal’aana irraa tolchameen mulluu Xobbee karatti hafee nyatan keessa baheera…Gaanfa Afrikaa abban humnaa ittin nu jifatu!
Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa87SHARESKana TamsaasiKana Tamsaasi
← OROMIYAAKOO-Tolassa Shaanqoo- Walaloo Martee Biyya ofii
CARRAA‬ DUKKANOOFTUU-KUTAA 2ffaa-Asoosama Gabaabaa-Rabbumaa Geetachoo Guddataa →